I-Luxury Loft Apartment ngakuMlambo iClyde - I-Airbnb
I-Luxury Loft Apartment ngakuMlambo iClyde
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMarc
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-11 Epr.
Iboniswe kakuhle enamagumbi amabini okulala akumgangatho ophezulu kwisakhiwo esiyimbali saseGourock Ropeworks. Indlu ibekwe kumgangatho we-5, ivumela ukufikelela kwiimbono ezintle ngaphesheya koMlambo iClyde nangaphaya.
Le ndlu ikwindawo entle ukuba ifikeleleke ngokulula kwaye ikumgama wokuhamba ukusuka eLoch Lomond
Eli gumbi liphezulu liphezulu liphezulu libandakanya ngaphezulu kwe-1600sft yesicwangciso esivulekileyo esinezitena ezibomvu zokuhlala. Umgangatho oqinileyo womthi oqinileyo kulo lonke igumbi elinemikhombe yokukhanyisa kunye neentsika zeempawu zokuqala kunye nomsebenzi wentsimbi. Le ndlu yakhiwe ngokufanelekileyo kulo lonke.
Iboniswe kakuhle enamagumbi amabini okulala akumgangatho ophezulu kwisakhiwo esiyimbali saseGourock Ropeworks. Indlu ibekwe kumgangatho we-5, ivumela ukufikelela kwimibono emangalisayo ngaphesheya koMlambo iClyde nangaphaya.
Isakhiwo iGourock Ropeworks sinemigangatho emi-6 esakhiwe ngezitena ezibomvu nezimhlophe neyayiqale yayindawo yokucoca iswekile ngeminyaka yoo-1860. Esi sisakhiwo somgangatho ophezulu saphuhliswa saziindawo ezikumgangatho ophakamileyo ngo-2008 ngentsebenziswano esondeleyo neMbali yaseScotland kwaye ngoku idweliswe 'A'.
Le ndlu ikwindawo entle yokujonga unxweme oluseNtshona lwaseSkotlani nangaphaya, abo banqwenela ukuthatha uloliwe banokwenza lula njengoko izikhululo zikaloliwe zasePort Glasgow zikumgama we-7mins ukuhamba, ukusuka apha ungahamba ngokulula ukuya kwiindawo ezinkulu kulo lonke elaseSkotlani.
Isicwangciso esivulekileyo seNdawo yokuHlala / Ikhitshi / yokutyela:
Umnyango wendawo yokuhlala uqulunqwe ngocango oluqingqiweyo olumangalisayo kunye nesakhelo esibonelela ngesakhelo esifanelekileyo somfanekiso kwiimbono ezimangalisayo ezinikezelwa yindlu. Ukugqibelela ngexesha lokuphuma kwelanga kunye nokutshona kwelanga indawo yokuhlala ikhanyisa xa imozulu inika kwaye ngexesha leenyanga zasebusika iintaba zekhephu zibonakala. Ngezikhumba ezibini ezikhulu ezongezelelekileyo zeTetrad kunye neesofa zelaphu, indawo yokuhlala inokuthatha lula abantu abadala ababini ukuba balale ukuba kuyafuneka.
Kukho indawo yekhitshi evulekileyo yegranite enezitulo zokucheba iinwele ezinqabileyo zokuhlala ngelixa isidlo sangokuhlwa silungiswa okanye ukonwabela iglasi yewayini kwaye ujonge umbono. Ikhitshi edibeneyo inazo zonke izinto zekhitshi eziyimfuneko ukulungiselela isidlo esihle.
Itafile entle enkulu yamaplanga kunye nezihlalo ziyafumaneka ukuba ukhetha ukumema undwendwe ukuba uyonwabele le ndlu intle ephezulu, izihlalo ezitofotofo zetafile abantu abayi-10.
Ngomsebenzi we-slate kunye ne-flooring, igumbi lokuhlambela libonelela ngokuhlamba okunzulu ukuze udibanise kude kube intliziyo yakho kunye nengqondo yakho yanelisekile emva kohambo lweentsuku okanye kwabo bakhetha ishawa; umphezulu woluhlu lweshawa yemonsoon iyafumaneka. Kukho indawo eninzi yokugcina kunye neetawuli ezikumgangatho ophezulu ezifumanekayo zokusebenzisa.
Igumbi lokulala eliphambili:
Le ndawo enkulu yegumbi lokulala inohambo lokuhamba kwiwadi yokugcina iimpahla okanye izinto ezenziwa ngaphandle, ifenitshala eyenziwe kakuhle eyenziwe ngamachule eThailand incoma ngokugqibeleleyo isilingi kunye neendonga eziphakamileyo zezitena.
Igumbi lokulala lesibini:
Eli gumbi lokulala lesibini elinesisa lilungele abantu abadala, abantwana okanye iindwendwe ezinebhedi ephindwe kabini kunye neewadi ezimbini zogcino.
Igumbi loncedo elifakwe ngokupheleleyo linendawo yokuhlambela, iikhabhathi ezifakelweyo kunye nesinki kunye 'nepuli' yokomisa iimpahla emva kosuku ngaphandle.
Ixabiso olihlawulayo kuba iindwendwe ezi-4 kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-£ 20 ngentloko nganye, ngobusuku be-5th 6th okanye undwendwe lwesi-7 okanye kufuneka ibhedi eyongezelelweyo.
Iintsuku eziyi-7 e Port Glasgow
4.86 · Izimvo eziyi-446
Abo bahamba ngemoto banokufikelela ngokulula:
Ukufikelela kwi-West Highland Way - 28mins
Iziko leSixeko saseGlasgow - 31mins
Iklabhu yeGalufa yeLargs - 42mins
Ikhosi yeGalufa yaseSkelmorlie-26mins
Ikhosi yeGalufa yaseWhinhill-14mins
Ikhosi yeGalufa yaseLangbank-11mins
Ikhosi yeGalufa yaseKilmacolm - 12mins
Izikhululo zeFerry: (zonke iindawo zokuwela iFerry ziqala kwi-25mins ukuya kwi-1hr ukuya kwiindawo ekuyiwa kuzo)
Unokufikelela kwiGourock Ferry Terminal ukuya eDunoon nge-19mins ekusa kwi-Holy Loch, eLoch Fyne, kwaye uphumle kwaye ube nombulelo.
Isikhululo seSikhitshane saseWemyss Bay sikubude bemizuzu engama-22 apho unokuhamba uye eArgyll naseBute.
Isikhephe esiya eCumbrae sifikelelwa kwisikhululo saseLargs, esikumgama oyi-38mins.
Indawo engqonge iNgingqi:
Ukuba unqwenela ukujonga indawo engqonge le ndlu ibekwe kakuhle iindawo ezimbalwa zasekhaya zokutyelela:
Inqaba yeMbali yaseNewark, apho unokuhamba khona ngaselunxwemeni ukuya eLangbank (kumnyango wakho)
ILoch Thom kunye neMuirshiel Country Park yeyona Park yaseScotland inkulu (15mins drive)
IMyuziyam yaseMcLean kunye neGalari yobuGcisa yinkwenkwezi ezine ezilinganiselwe simahla umtsalane welifa lemveli (20mins drive) (URL HIDDEN)
I-Beacon Arts Centre (15mins drive) yindawo yobugcisa yale mihla esecaleni komlambo eneendawo ezi-2 zokusebenza, iindawo zokuziqhelanisa kunye nebistro/ibha.
I-Finlaystone County Estate (i-5mins drive) Iigadi ezintle ezinabileyo, iindawo ezinamahlathi kwaye zigcwele iMbali; kukho imisebenzi yentsapho ekhoyo unyaka wonke.
I-Ingliston Country Club (i-11mins drive) Ifakwe ngaphakathi kweenduli eziqengqelekayo zelizwe laseRenfrewshire, i-Ingliston Country Club yiklabhu eyodwa, eqhutywa lusapho enento yokuba usapho lonke luyonwabele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Port Glasgow